Couronne de l’Avent – Trinitera Malagasy
Ho an’ireo mampiasa ny Couronne de l’Avent dia mba tiako ny hifampizarana ity aminareo. Araka ny lovantsofina dia fomba nankalazana ny fetin’i Mb Lucie ireo labozia efatra mena. Ary satria ny 13 desambra dia mazàna anatin’ny fotoanan’ny Fihaviana, hany ka noraisin’ny Pastera sasany protestanta io fomba io (satria tsy mankalaza ny olomasina izy ireo : Lucie midika hoe hazavana) hoentina manomana ny noely. Nivoatra tsikelikely araka izany ity fomba ity, hatramin’ny taonjato faha-16 (±). Ny hevi-dehibe fonosiny dia maro, sady samy manana ny fomba nanazavany azy arakaraka ny Fampianarana tiana hovoizina manditra ny taona litorjika. Ny Couronne aloha midika fa mitohy ny fiainana, ary araka ny hevitry ny besinimaro dia midika fandresena ny fehiloha, dia i Kristy ilay mandresy ny fankahalana sy ny haizina; ny fiainantsika kosa mivoatra tsikelikely hazavain’i Kristy. Ny loko sy ny hevitr’ireo Jiro kosa dia tsy hita be ihany izay marina. Ao ny manohy ny tradition ka manohy ny jiro mena araka ny fomba tamin’ny fetin’i Mb Lucie. Ao ny manao azy ireo volomparasy sy vony (lokon’ny Fanamiana litorjika mandritra ny vanim-potoana). Ao kosa ny milaza loko efatra samihafa…
Ny sasany ary araka izany milaza fa manambara ny Mpaminany (Fanantenana), an’i Betlehema (Antso mba ho masina), an’ny Mpiandry ondry (Hafaliana) ary ny Anjely (fitiavana) ny labozia.
Rehefa nandinika ireo rehetra mety ho azoko novakiana sy nalalinina aho, dia heveriko fa ny marim-pototra indrindra sady manampy antsika hahazo ny misterin’ny Fiaviana dia n loko efatra ambaran’ny labozia :
volomparasy (alahady I) manambara ny famelana (fivalozana) antenaintsika izay nampanantenain’Izy Tompo an’i Adama sy Eva tany am-piandohana.
Mena (Alahady II) manambara ny finoan’i Abrahama izay tonga rain’ny Mpino
Vony (Rose) (Alahady III = gaudete) manambara ny hafalian’i Davida nampanantenaina fa ho razamben’ny Mesia, ilay Mpanjaka hanjaka mandrakizay amin’i Israely.
Fotsy (Alahady IV) manambara ny mpaminany izay nanambara fa ho avy ilay mpamonjy antsika.
Rehefa izany dia tonga ny Noely (Mt 1, 18)
Bonne année liturgique!
ALATSINAINY I FIAVIANA
Alahady I Fiaviana Taona A